Ngaphambi kweMfazwe Yehlabathi yesi-2, inhlalakahle yaseBrithani-njengentlawulo yokuxhasa abagulayo-yayinikezelwa ngamandla ngamaziko abucala, amavolontiya. Kodwa utshintsho kwimbono ngexesha lemfazwe lavumela iBrithani ukuba yakhiwe 'iNtlalontle State' emva kwemfazwe: ilizwe apho urhulumente ahlinzekela inkqubo enhlalakahle yokuxhasa wonke umntu ngexesha lokufuna. Lihlala likhulu kakhulu namhlanje.
Inhlalakahle ngaphambi kweMinyaka Yemashumi mabini
Ngenkulungwane yeshumi elinamibini, iBrithani iqalisa ukusebenza kwiLizwe loLuntu loLuntu.
Nangona kunjalo, imbali yentlalontle yezenhlalakahle eBrithani ayizange iqale kweli xesha, njengoko abantu babechithe iiklasi ukuguqula indlela yokujongana nabagulayo, abampofu, abangasebenzi kunye nabanye abantu abajamelene nobuhlwempu. Iicawa kunye neepariti zavela kwixesha elide kunye nenxaxheba ehamba phambili ekunyamekeleni abahlelelekileyo, kwaye imithetho ye- Elizabethan ephosakeleyo yacacisa kwaye yomeleza indima yeparishi.
Njengoko uguquko lwezentengiselwano lushintsha iBritani - njengoko abantu bekhula, baqokelele ekwandiseni imimandla yasezidolophini, kwaye bathatha imisebenzi emitsha ngokunyuka kwamanani - ngoko inkqubo yokuxhasa abantu nayo yavela , ngamanye amaxesha nemithetho karhulumente iphinda icacise imizamo, ukubeka amanqanaba omnikelo kunye nokubonelela ukunyamekela, kodwa rhoqo kubonga kwizibonelelo kunye nokuzimela ngokuzimela. Nangona abaguquleli bezama ukucacisa into eyenzekayo, imeko elula kunye nephosakeleyo yabasweleko yaqhubeka ixhaphake, ngokubhekene nobuhlwempu ngenxa yokungaziphathi kakuhle okanye ukuziphatha kakubi kunokuba kubekho iimeko zentlalo-qoqosho, kwaye kwakungekho nkolelo yokuba urhulumente kufuneka asebenze inkqubo yakhe yentlalo-ntle.
Abantu abafuna ukukunceda, okanye uncedo olufunekayo, ngoko kwakufuneka bajikelele kwicandelo lamavolontiya.
Ezi zidale inethiwekhi enkulu yokuzithandela, kunye noluntu kunye noluntu olunobungqina obubonelela ngomshuwalense kunye nenkxaso. Oku kuye kwabizwa ngokuba 'uqoqosho lwezentlalo ezixutywanga', njengoko kwakumxube weenkqubo zamashishini karhulumente nakwabanye.
Ezinye iindawo zale nkqubo zibandakanya izibhengezo, indawo apho abantu beza kufumana umsebenzi kunye nendawo yokukhusela, kodwa kwinqanaba elisisiseko 'baya kukhuthazwa' ukuba bafune umsebenzi ongaphandle ukuze baziphucule. Ngomnye umgca wesilinganiselo senceba yanamhlanje, unemizimba eyakhiwe yimisebenzi njengabavukuzi, apho bahlawula i-inshorensi kwaye bawakhusela kwingozi okanye ukugula.
I-20 Century Welfare phambi kweBeveridge
Imvelaphi ye-Modern Welfare State eBrithani idla ngo-1906, xa uHerbert Asquith kunye neqela leLiberal bafumana ukunqoba kwehlabathi kwaye bangena kurhulumente. Baya kuqhubeka nokuzisa iinguqulelo zentlalontle, kodwa abazange bajolise kwiqonga lokwenza njalo; Enyanisweni, bawunqanda umba. Kodwa kungekudala abapolitiki babo benza utshintsho eBrithani kuba kwakukho isakhiwo soxinzelelo sokwenza. IBritani yayisisityebi esinobutyebi, ehlabathini esilawulayo, kodwa ukuba ubheka ukuba unokufumana lula abantu abangengamahlwempu kuphela, kodwa ngokuqinisekileyo baphila ngaphantsi kweendlala. Umxinzelelo wokusebenza kunye nokudibanisa iBritani ibe yintsimi ebantwini ekhuselekile kunye nokuphikisana nokwahlukana kweBrithani ukuya kwiihafu ezimbini eziphikisanayo (abanye abantu babecinga ukuba sele sele kwenzeke), yaxutyushwa ngu-Will Crooks, uMphathiswa wezabasebenzi othi ngo-1908 "Nanku kwilizwe elityebile ngaphaya kweenkcazo kukho abantu abahluphekileyo ngaphezu kwengcaciso. "
Ukuqala kwenguqu yekhulu lama-20 kwakuquka ipenshoni ehlolwayo, engekho inxaxheba, ipensheni yabantu abangaphezu kwe-70 (uMthetho we-Old Age Pensions), kunye ne-National Insurance Act ka-1911 enika i-inshorensi yempilo. Ngaphantsi kwenkqubo, iindibano ezinobungane kunye namanye amabhunga aqhubeka nokuqhuba amaziko ezonyango, kodwa urhulumente wahlela iintlawulo kunye naphandle. I-inshurensi yayiyona ngongoma ebalulekileyo kule nto, njengoko kwakukho ukungafuni phakathi kweeLiberal ngaphezu kokunyusa irhafu yengeniso ukuhlawula inkqubo. (Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-Chancellor yaseJamani uBismarck ithatha i-inshorensi efanayo njengendlela yokukhokha yerhafu eJamani.) AmaLiberal ajongene nenkcaso, kodwa uLloyd George wakwazi ukukholisa isizwe.
Olunye utshintsho olulandelwe ngexesha lokulwa phakathi kwemfazwe, njengabahlolokazi, iNtandane, kunye ne-Old Age Contributory Pensions Act ka-1925.
Kodwa ezi zinto zenza utshintsho kwinkqubo endala, ukuxhamla kwiindawo ezintsha, kunye nokungabikho kwemisebenzi kwaye ukunyanzelwa kwengxaki kwimeko yezinto eziphathekayo, abantu baqala ukukhangela ezinye, ubukhulu becala, amanyathelo, awayeyityhilela ingcamango yabantu abafanelekayo nabangasifanelanga ngokupheleleyo.
Ngomnyaka we-1941, ngeMfazwe yehlabathi yesiBili 2 kwaye akukho nqoko ebonakalayo, uChurchill wayesoloko ekwazi ukuyila ikhomishana yokuphanda indlela yokwakha kabusha isizwe emva kwemfazwe. Oku kwakuquka ikomiti eya kuhamba ngamasebe karhulumente amaninzi kwaye yayiza kuphanda iinkqubo zentlalontle yesizwe kwaye iphakamise uphuculo. I-Economist, i-Liberal politician kunye neengcali zengqesho uWilliam Beveridge wenziwa ngumongameli wale khomishini. U-Beveridge wayengumntu onobuqili, waza wabuya ngoDisemba 1, 1942 kunye ne-Beveridge Report (okanye 'Inkonzo Yobuntuntu YaseNtlalontle kunye neNkonzo zoLuntu' njengoko kwaziwa ngokusemthethweni). Ukubandakanyeka kwakhe kwakunjalo kakhulu abantu bakhe babenqume ukuwusayina ngokusayina kwakhe nje. Ngokubhekiselele kwintlalo yeNtlalo yaseBrithani, ngokuqinisekileyo le nto ibaluleke kakhulu kwincwadi yekhulu lama-20.
Ishicilelwe nje emva kokuqala kokunqoba okuBambene, kunye nokuthelela kule themba, uBeveridge wenza iinqununu zeengcebiso zokuguqula uluntu lwaseBrithani nokuphelisa 'ukufuna'. Wayefuna 'ukulala emangcwabeni' ukhuseleko (ngoxa akazange azalise eli gama, liphelele), kwaye nangona iimbono zazingabonakali zintsha, zibaninzi ngokubanzi, zapapashwa zaza zamkelwa ngokubanzi luluntu lwaseburhulumenteni waseBrithani ukwenza ukuba yingxenye ebalulekileyo yeBritani ayilwayo: ukuphumelela imfazwe, ukuguqula isizwe.
I-Beveridge yeNtlalontle State yayiyindlela yokuqala yokucetyiswa ngokusemthethweni, inxaxheba ngokugcweleyo (nangona igama lalingeneminyaka eli-10 ubudala).
Olu lungiso lujoliswe kulo. I-Beveridge yachonga "amaqhosha amahlanu" kwindlela yokwakha "eyayiza kubethwa: ubuhlwempu, izifo, ukungazi, ukuxhamla, nokungazi. Wayechasene nale nto ingasombululwa kunye nenkqubo yomshuwalense we-state-run, kwaye ngokuchaseneyo nezicwangciso zangeenkulungwane zangaphambili, ubuncinane ubunqanaba bebomi buya kuqinisekiswa ukuba kwakungekho mkhulu okanye ujezisa abagulayo ngenxa yokuba bengakwazi ukusebenza. Isisombululo saba yindawo yoluntu nokhuseleko loluntu, inkonzo yezempilo yelizwe, imfundo yamahhala kubo bonke abantwana, iikomiti ezakhiwe kunye nezindlu zokuhlala kunye nokuqeshwa ngokupheleleyo.
Ingcamango ebalulekileyo kukuba wonke umntu osebenzayo uya kuhlawula isibonelelo ku rhu lumente xa bebesebenze, kwaye ngokubuyisela babe nofikelelo ku-urhulumente uncedo kubantu abangaqeshwanga, abagulayo, abaqeshwe umhlalaphantsi okanye abafelokazi, kunye neentlawulo ezongezelelweyo zokuncedisa abo banyanzelwe umda ngabantwana. Ukusetyenziswa kwe-inshorensi yendalo yonke kususwe uvavanyo lweendlela kwiinkqubo zentlalontle, ukungathandwa - abanye banokukhetha indlela yokuzondla ngaphambili-imfazwe yokumisela ukuba ubani omele afumane uncedo. Enyanisweni, u-Beveridge akazange alindele inkcitho kaRhulumente ukuba ikhule, ngenxa yeentlawulo ze-inshorensi ezaza, kwaye ulindele ukuba abantu basoloko basindise imali baze benze okusemandleni abo, kakhulu ekucingeni i-british tradition. Umntu wahlala, kodwa uRhulumente unikele ngenzuzo kwi-inshorensi yakho. I-Beveridge yayicingelele kwinkqubo yongxowa-mali: oku akuzange kube ngokobukhomanisi.
State Modern Welfare State
Kwiintsuku zokufa kweMfazwe Yehlabathi 2, iBritani yavotela urhulumente omtsha, kwaye ugxininiso loRhulumente wezabasebenzi lwabenza baba namandla (iBeveridge ayikhethwanga.) Zonke iiplanga eziphambili zazisenzela ukuguqulwa, njengoko abasebenzi babenomkhankaso kubo kwaye babakhuthaza njengomvuzo owenzela umzamo wemfazwe, baqala, kunye neentlobo zezenzo nemithetho yagqitywa. Ezi zibandakanya uMthetho we-Intshuwalense kaZwelonke ngo-1945, ukudala iminikelo enyanzelekileyo evela kubasebenzi kunye nokukhululeka kokungasebenzi, ukufa, ukugula kunye nokuthatha umhlalaphantsi; UMthetho weeNkxaso zoMndeni ohlinzeka iintlawulo zeentsapho ezinkulu; Umthetho weeNkcitho zoNyaka we-1946 obonelela abantu ukuphazamiseka emsebenzini; U-Aneurin Bevan ka-1948 uMthetho weSizwe wezeMpilo, owadala i-universal, inkululeko kuzo zonke iinkqubo zonyango lwezempilo loluntu; UMthetho woNcedo lukaZwelonke we-1948 ukunceda bonke abanesidingo. Umsebenzi wezeMfundo ka-1944 wawugubungele ukufundiswa kwabantwana, izinto ezininzi ezinikezelwa iBhunga leZindlu kunye nokuvuselelwa kwakhona kwaqala ukutya ukungena kwemisebenzi. Unxibelelwano oluninzi lweenkonzo zentlalontle enkonzo zihlangene kwinkqubo entsha karhulumente. Njengoko iimpawu zika-1948 zibonwa njengento ebalulekileyo, lo nyaka ubizwa ngokuba ngumhla wokuqala kweBrithani ye-Welfare State.
Urhulumente wezeNtlalontle akaphoqelekanga; Enyanisweni, yafunyanwa ngokubanzi ngurhulumente owawufuna kakhulu emva kwemfazwe. Emva kokuba iNdlu yeNhlalakahle yenziwe iqhubekele ukuguquka ngokuhamba kwexesha, ngenxa yeemeko zezoqoqosho ezishintshayo eBrithani, kodwa ngenxa yecandelo lezopolitiko lamaqela ayefudukayo naphandle kwamandla. Ukuvumelana kwemibandela yama-forties, ama-fiftyties, kunye namashumi mathandathu aqala ukutshintsha ekupheleni kweminyaka engamashumi asixhenxe, xa uMargaret Thatcher kunye ne-Conservatives baqalisa uluhlu lweenguqu malunga nobunzima bukaRhulumente. Babefuna iirhafu ezimbalwa, ukuchitha imali encinci, kunye nokutshintsha kwentlalontle, kodwa ngokulinganayo babhekene nenkqubo yezenhlalakahle ezaqala ukungazinzi kwaye ziphezulu. Ngako oko kukho ukucutshulwa kunye neenguqu kunye namanyathelo angasese aqala ukukhula ngokubaluleka, ukuqala ingxoxo malunga nenxaxheba yombutho entlalontlalweni eyaqhubeka nokunyulwa kwamaTories phantsi kukaDavid Cameron ngo-2010, xa 'i-Big Society' inokubuyisela uqoqosho lwezentlalo oluxubeneyo lwaluphelile.
Open - ukuvula
Indlela i-Impress Agrippina yaseRoma eyancincileyo